🚀 Bitcoin Mining kumntu wonke! | Crowd-Mining.io
Bitcoin Mining kumntu wonke!
Yinto super elula - Umncedisi wakho sele imisiwe kunye esebenzayo. Yenza akhawunti yakho ngoku. Kwaye bafumane Bitcoins yakho yokuqala. sebenzisa nje Bitcoin cloud mining service yethu!
Funda into eyenza unique Crowd-Mining.io.
Bitcoin mining yenzelwe ukuba resource-olunzulu kunye nzima. Inani Iibhloko eyafunyanwa Miners ihlala ngokuthe ngcembe. Emva kokuba umncedisi ubhaqa block, oko amabhaso ngokwayo nge isahlulo Bitcoins. Okwangoku le nokwaba Bitcoins-25.
Siya kunika abatyali bethu ithuba lokuba utyalo kushishino lwethu. Kwaye ngokusekelwe kwinkqubo echazwe apha ngasentla, uzuza inzuzo ngemihla. Ngaphezu koko, abatyali-zimali unolwazi Daily-Mining-Newsletter yethu.
Bitcoin Mining a block kunzima kuba SHA-256 hash ye iibhloko header kufuneka ibe ngaphantsi kune okanye ilingana target. Le ngxaki olulula iinjongo Ingcaciso: Le Hash ibloko kufuneka uqale inani elithile amaqanda. Amathuba yokubala a asa eqala Ngama ezininzi luphantsi kakhulu.
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, ukubala omnye liyadla umzamo omkhulu zezibalo. Ngoko ke, kuyimfuneko ukuba uhlale wazi kunye abancedisi. Sisebenzisa kuphela oomatshini Bitcoin ASIC entsha kukhululwa. Enkosi entsebenziswano ezinkulu, sifumana amaxabiso best iiseva ezintsha.
Ngenxa iqela lethu uphuhliso, sinako ngokuzingca ukunazisa ukuba une ezintsha Web-Dashboard kukhululwa kubathengi bethu. Kuyo ukuba ujonge iziphumo Daily Mining. Kwaye ke ukuthenga yesivumelwano elandelayo.
I ukunika imvume wam, ukuba email wam igcinwe.